ISt. Vincent kunye neGrenadines inika ingxelo yokunyuka kwama-7.1% kubakhenkethi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo » ISt. Vincent kunye neGrenadines inika ingxelo yokunyuka kwama-7.1% kubakhenkethi
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Resorts • ISaint Vincent kunye neGrenadines Breaking News • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukufika kweendwendwe eSt. Vincent naseGrenadines kwiinyanga ezintlanu (5) zokuqala zika-2019 kunyuke nge-7.1%. Amanani okwethutyana kwisithuba sikaJanuwari ukuya kuMeyi abonisa ukuba zingama-232, 916 iindwendwe eze eSt. Vincent naseGrenadines kulo nyaka ukuza kuthi ga ngoku, xa kuthelekiswa nama-217,453 ngo-2018.
Ukufika ngomoya kukonyuke nge-7.1% ngama-36,757 ewonke ngo-2019 xa kuthelekiswa nama-34,335 ngo-2018 okanye umahluko wokuhlala kwabakhenkethi abangama-2,486. Imakethi yaseCanada ibhalise olona nyuko lukhulu kubantu abafikayo ngokunyuka nge-16.9% ngelixa imarike yase-USA ibhalise ukwanda nge-11.4% ilandelwa yimakethi yase-UK inyuke nge-10%.
Ukufika kweYacht kukhule nge-7.6% ngeenyanga zikaJanuwari ukuya kuMeyi ngenani elipheleleyo labakhenkethi abangama-37,926 abakhenkethi kwisithuba seenyanga ezintlanu ngo-2019 xa kuthelekiswa nama-35,240 kwangexesha elifanayo ngo-2018. Kwangelo xesha linye kubhaliswa ukwanda nge-158,233% ngaphezulu kwe-7.0 yeendwendwe zokuhamba ngenqanawa ixesha lokuthelekisa kwi-147,878.
Ukusukela oko kwavulwa iSikhululo senqwelomoya i-Argyle ngoFebruwari ka-2017 abathwali abathathu bamazwe aphesheya bebeqhuba ngeeveki bezindiza ezingamisiyo ukuya kwindawo esiya kuyo. Kwangoko kulenyanga iAmerican Airlines ibhengeze inqwelo moya yesibini ngeveki eya kwi-AIA ukusukela ngoDisemba 2019 xa inqwelo moya iza kuqhuba inkonzo yangoku yangoMgqibelo kunye nenkonzo yangoLwesithathu. Inkonzo ye-American Airline engayeki kwisikhululo senqwelomoya i-Argyle International Airport iyakuthi incedise inkonzo ye-Airlines yaseCaribbean ngeveki engapheliyo kwinkonzo ye-JFK International, e-USA kunye ne-Air Canada Rouge ngeveki ngoLwesine engayeki inkonzo evela ePearson International, Canada. I-Air Canada Rouge iya kuphinda isebenze inkonzo yesibini engaphelanga ngeCawa yexesha lasebusika eliqala ngoDisemba 15, 2019.